ဟန်းဂုရွာ: အကျိုးရှိရှိ ငိုက်ကြစို့
ရေးသားသူ — စိုးမိုးသူ
အင်တာနက်မှာ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် လွှတ်တော်ထဲ၊ အစည်းအဝေး ခန်းမတွေထဲမှာ ဆွေးနွေးနေ စဉ် ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်ငိုက်နေကြတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မြင်တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
နေ့မအား ညမအား တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အိပ်သွန်ဖာမှောက်ကြိုးစားနေကြလို့လား၊ အခြားအကြောင်းကြောင့်လားတော့ မသိ ဦးဆောင်သူတို့ရဲ့ အဲဒီလို အပြုအမူကို မြင်ရတဲ့ ပြည်သူ အပေါင်းကလည်း စာရေးပြီး ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ငိုက်တတ်တာဟာလူ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် အကျိုးမဲ့ ငိုက်တာထက် အကျိုးရှိရှိ ငိုက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မိမိယူထားတဲ့ နေရာနဲ့ ကျေပြွန်ရမည့် တာဝန်ကိုလည်း မလစ်ဟင်းရအောင် အကျိုးရှိရှိ ငိုက်တတ် လေ့ ရှိတဲ့ ကိုရီးယားရဲ့ ဆိုးလ်မြို့တော်ဝန် မစ္စတာ ဘာ့ဂ်ဝန်ဆူးန်ရဲ့ အကြောင်းကို တင်ပြပါ့မယ်။
လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေကနေ ဆိုးလ်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာသူ မစ္စတာဘာ့ဂ်ဟာ ဆိုးလ်မြို့တော်ဝန်တာဝန်ကို လက်ရှိ ထမ်းဆောင်နေ ဆဲဖြစ်သလို အရင်မြို့တော်ဝန်တွေထက် သာလွန်သူဖြစ်ကြောင်း ကောင်းချီးပေး ခံနေရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နေ့စဉ် မပြတ်ဆိုသလို မိမိတာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်နေသော လုပ်ငန်းများ အကြောင်း(အောင်မြင်မှု၊ အဆင်မပြေမှု စသည်)ကို ဖေ့စ်ဘွတ်၊ twitterမှတဆင့် ပြည်သူ့ထံ အမြဲမပြတ် စာရေး အသိပေးလေ့ရှိသလို ပြည်သူများရဲ့ မေးခွန်းများကိုလည်း ဂရုတစိုက်ဖြေကြားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို မိမိထမ်းဆောင်နေသော တာဝန်များကို ပြည်သူ့ထံ ပွင့်လင်းစွာ တင်ပြပေးခြင်း၊ ပြည်သူရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ဂရုတစိုက် ရယူခြင်းဖြင့် ပြည်သူနဲ့ စက္ကန့်မလပ် အနီးကပ်ဆုံးနေသူ မြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ် ကိုယ်တိုင်လည်း ငိုက်လေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကို သူ့ကိုယ်ပိုင် ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဆိုသူများ ပြည်သူ့အဆဲကင်းပြီး ငိုက်တတ်အောင် မြို့တော်ဝန်ဘာ့်ဂ်ရဲ့ ငိုက်ပုံ ငိုက်နည်းကို မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ဘာသာပြန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆိုးလ် မြို့တော်ဝန်ဘာ့ခ်ဝန်ဆူးန်
မြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ်ရဲ့ ငိုက်ပုံငိုက်နည်း ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံစာ
လူတွေက ကျနော့ကို မေးကြပါတယ်။ အိပ်ကောအိပ်ပါရဲ့လားတဲ့။
အဲဒီတော့ ကျနော်က ဒီလို တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျနော့လက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တကြိမ်လောက် ကိုင်ကြည့်ပါလား။ ကျနော်က လူမဟုတ်ဘူး သံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့သူလို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။
ဒါ ကျနော် နောက်ပြောတာပါ။ လူတွေက အဲလို သိချင်ကြတဲ့ အကြောင်းရင်းက ကျနော်က twitter , facebookမှာ ညဉ့်နက်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အာရုဏ်ဦးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲ စာတွေတင်လေ့ရှိတာကို တွေ့ တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ကျနော်လည်းမအိပ်ပဲတော့ နေပါ့မလားဗျာ။ နေ့စဉ် ည ၁နာရီ၊၂နာရီမှာ အိပ်ယာထဲဝင်၊ မနက်ချိန်းဆိုထားတာကို သွားဖို့ ၆နာရီ၊၇နာရီမှာ အိပ်ယာထရတော့ အိပ်ချိန်၎၊ ၅နာရီလောက်ပဲရ တယ်လေ။ အိပ်ရေးမ၀တာကြောင့် သွားလာရင်း ကားပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရုံးခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခဏလောက် ငိုက်လေ့၊ အိပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အိပ်လိုက်ရင် မနက်ခင်း အိပ်ယာထသလို လန်းဆန်းသွားတာကြောင့် အဲဒီလို တမှေးအိပ်ရဲ့ အရသာကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတလေ အဲဒီလို တမှေး အိပ်ခွင့်တောင်မရှိတဲ့နေ့တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
Schedule တွေ ဆက်တိုက် ပြည့်နေတဲ့ နေ့ တွေလေ။ ကျနော့်ဆီ လူတွေက ရေတက်လာသလိုမျိုး ၀ိုင်းအုံနေပြီး ကျနော်က စက်ရုပ်လို Schedule တွေကို ကျေလည်အောင်ဖြေရှင်းရပါတယ်။ အဲဒီလိုနေ့တွေဆို ကျနော့်မှာ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်။
လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်လေးမှာလည်း သူတို့ မရိပ်မိအောင် ငိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ အစည်းအဝေးချိန်ဟာ ငိုက်လို့အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ ကျနော်က မြို့တော်ဝန်ဆိုတော့ အလယ်ခေါင်မှာ ထိုင်ရတာမို့ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်နဲ့ မငိုက်မိအောင် မျက်စိကို ဖွင့်ပြီး အိပ်တယ်လေ။ အဲလို နည်းနဲ့ အိပ်ရင်းနဲ့ကနေ ကြားဖြတ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ၀င်ဝင်ပြီး မေးလိုက်တော့ လူတွေက ကျနော် ငိုက်တာကို လုံးဝ သတိမထားမိတော့ဘူးပေါ့။
ဒါဟာ အိပ်ငိုက်နေရင်းနဲ့ပဲ အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းတွေကို မလွတ်ရအောင် ကြိုးစားတာလေ။
ကဲ၊ ဒီအခြေအနေလောက်ဆိုရင်တော့ ကျနော် အိပ်ငိုက်တတ်ခြင်းရဲ့ အထက်အဆင့် တဆင့်ကို ပေါက်မြောက်နေပြီပေါ့နော်? ^^
သြော်၊ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေ အနေနဲ့ ကျနော့်ကို အတုမခိုးကြနဲ့နော်။ ကလေးတို့ကတော့ စောစောအိပ် စောစောထရမယ်နော်။
အောက်မှာ မြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ်ရဲ့ Facebookပါ မူရင်းစာသားဖြစ်ပါတယ်။
많 은 사람들이 저에게 묻습니다. 잠은 언제 자느냐구요? 그러면 제가 이렇게 요청합니다. 내 손과 몸을 한번 만져보라구요. 내가 사람이 아니고 철인이라는 말을 덧붙입니다. 물론 농담입니다. 사람들이 이렇게 궁금해 하는 이유는 트위터나 페이스북에 밤늦은 시간이나 새벽에도 글을 올리는 것을 보곤 하기 따문이지요.
사실 저라고 잠을 자지 않기야 하겠어요. 사실 새벽 1 - 2시에 잠잤다가 조찬약속때문에 6시나 7시에 일어나면 4-5시간밖에 못잘 때가 잇있지요. 잠이 아무래도 모자라니까 이동중에 차안에서나 사무실에서 조금씩 졸거나 자지요. 그러면 마치 아침에 일어난 듯 개운하게 되니까 이른바 '쪽잠'의 묘미를 터득해서 잘 활용하고 있는 것이지요
사실 어떤 날은 이렇게 쪽잠도 잘 수 없는 날도 있습니다. 계속 일정이 계속되는 것이지요. 마치 밀물처럼 사람들이 몰려오고 저는 기계처럼 일정을 소화합니다. 그런 날은 저도 비몽사몽입니다. 상대방과 대화하는 순간에도 그가 눈치채지 못하게 살짝 살짝 조는 것이지요. 회의하는 순간은 참으로 졸기 좋은 시간입니다. 제가 명색이 시장이고 가운데 앉아있으니 그것도 요령껏 꾸벅 꾸벅하지 않고 심지어는 눈도 뜨고 자는 것이지요. 그러다가 중간에 예리한 질문도 함으로써 마치 전혀 졸지 않았던 것처럼 보이는 것입니다. 졸면서도 전체 회의의 맥락을 놓치지 않는 것이지요. 이정도 되면 거의 졸음의 신적 경지에 왔다고 볼 수 있지요?^^ 어린이는 따라 하지 마세요! 새나라의 어린이는 일찍 자고 일찍 일어난답니다.^.^
Posted by စိုးမိုးသူ at 4:10 PM
Labels: ထိုးနှက်ချက်, ဘာသာပြန်, ဆောင်းပါး
သပြေညို ဘယ်လိုမှ မသေပါ
ဆန်မျိုးစုံနှင့် ဂျပန်ကီမိုနိုဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို ဖုန်းဖြင့်မှာယူနိုင်ပြီ